ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ကန်တော်အောက်က ကောက်ရတဲ့ ကဗျာ
ကန်တော်အောက်က ကောက်ရတဲ့ ကဗျာ
ဘယ့်နှယ် ရုံးရောက် ဂတ်ရောက် ဖြစ်ရတာလဲ
ကင်းငြိ မြွေထိ ဖြစ်မယ့်ကိန်း။
ကြွေးပူ ဘုရင်ဆပ်သာ ကြားဖူးပါတယ်
တောင်သာ မြင်းခြံကို ကူးရင်
မုံရွာ - မန္တလေး - အိုးဘိုမှာ နော်အုန်းလှ
ခင်ဗျားလူထု၊ စနစ်ကို အန်တုဖို့
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 10:19 PM
- ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံဆီသွားနေပါတယ် ကြွေးကျော်နေပြီး
- တိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်မယ် ၊ပြည်သူတွေကို ဘယ်တော.မှ
သစ္စာမဖေါက်ဘူး ပြောပြော နေတဲ. သူတွေက
- ဒီမိုကရေစီဟာ ဝေးသေးတယ်လို. ပြည်သူတွေ အရိုးထဲ
စွဲနေကြတာ လည်း အဆိုးမြင်လို.ပြောမရပေဘူး ။